“नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्ट” मा अडिसन दिनुहोस् र ७० लाख जित्नुहोस् !
काठमाण्डौ । बहुप्रतिभाको मञ्च “नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्ट”को अडिसन यहि जेष्ठ ५, ६ र ७ गते काठमाण्डौमा हुनेछ । काठमाण्डौको यति पार्टी प्यालेस ५, ६ र ७ गते बिहान १० बजे..
‘भारतले नेपालको ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन उपनिवेश' बनाएको विषय चीनमा उठ्यो
काठमाडौं । ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतले नेपालको ६० हजार वर्ग किमि जमिन उपनिवेश बनाएको बताएका छन् । चीनमा सुरु भएको ‘कन्फरेन्स अन डायलग अफ एसियन सिभिलाइजेसन’ नामक एसियाली सम्मेलनमा..
डिभिजन अधिकृतसहित २० जना विरुद्ध मुद्दा, को को हुन भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने
काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय, हेटौंडा, मकवानपुरका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत प्रल्हादप्रसाद धितालसमेत २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समुदायिक वनको काठ अवैधानिक रुपमा कटानी गरी २०..
त्यो हो बर्दिया भनेपछि ‘बाघ’
राजापुर । बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्जमा लोभलाग्दो गरी बढेको बाघको सङ्ख्या र बाघ हेर्नकै लागि बर्दिया आउने पर्यटकको पछिल्लो तथ्याङ्कले बर्दियाले अर्को उपमा थपेको छ । त्यो हो बर्दिया भनेपछि ‘बाघ’..
काठमाडौँमा यौन व्यवसायमा संलग्न १ सय २५ जना पक्राउ
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न भागबाट यौन व्यवसायमा संलग्न रहेको आरोपमा १२५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले नयाँ बसपार्क, गौशाला, पुरानो बसपार्क, बागबजार, चावहिललगायतका क्षेत्रमा बाटोमा..
किन दियो भोलि प्रदेश २ ले सार्वजनिक विदा ?
जनकपुरधाम । जानकी नवमीको अवसर पारेर प्रदेश २ मा सोमबार सार्वजनिक विदा हुने भएको छ । प्रदेश २ सरकारले जानकी नवमीको अवसर पारेर सोमबार प्रदेशभित्र सार्वजनिक विदा दिएको हो । यस..
जब पाइलटले बेहोशी मै ४० मिनेट विमान उडाए
एजेन्सी । अस्ट्रेलियामा एउटा अचम्मको घटना भएको छ । त्यहाँ प्रशिक्षु पाइलटले एडिलेड विमानस्थलमाथिको हवाई क्षेत्रमा लगभग ४० मिनेटसम्म बेहोशीमै विमान उडाएका छन् । उडानअघि उनले पर्याप्त मात्रामा निद्रा पाएका..
आईतवार र सोमवार दुई दिन सार्वजनिक बिदा, कहाँ कहाँ हुन्छ विदा ?
काठमाडौं ।ललितपुर महानगरपालिकाको बासिन्दाले दुईदिन लगातार बिदा पाउने भएका छन् । आईतवार ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकामा मात्र बिदा दिईएको छ भने र ललितपुर महानगरपालिकाले सोमबार सार्वजनिक विदा नै दिएको छ । ललितपुरको..
एजेन्सी । ऊबर टेक्नोलोजी इंकले शुक्रबार जारी गरेको आईपीओमा लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । पहिलो दिन कम्पनीमा ३ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको..
कहिले हेर्न पाइन्छ डिभीको रिजल्ट ? यस्तो छ सूचना
काठमाडौ । के तपाईले डिभी भर्नुभएको थियो । यदि थियो भने तपाईको नतिजा मङगलबार राति ९ः४५ बजे निस्किएको छ । अमेरिकाले डिभी चिठ्ठाको नतिजा निकाले पनि नतिजा हेर्न भने मिलेको छैन..
यूएईमा टुरिस्ट भिसामा गएर भीख माग्छन् भारतीयहरू !
एजेन्सी । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को प्रहरीले मगन्तेहरूका विषयमा अनौठो खुलासा गरेको छ । दुबई प्रहरीले दाबी गरेअनुसार, रमजानको महिनामा एसियाली मुलुकका मानिस टुरिस्ट भिसामा आएर भिक्षा माग्छन् । हालै..
जमीनमुनिबाट ग्यास निस्कियो, आगो बलेपछि हेर्नेको भीड
पाल्पा । माथागढी गाउँपालिका–२ रुप्सेस्थित सोलेमा सिँचाइका लागि पाइप गाड्दा जमीनमुनिबाट प्राकृतिक ग्यास निस्केको छ । सिँचाइका लागि पानी निकाल्न ट्युबवेल गाड्ने क्रममा जमीनमुनिबाट ग्यास निस्किरहेको छ । स्थानीय ताराबहादुर कुमालको..
काठमाडौं । पति वा पत्नीबीच भएका जुनसुकै कुरा प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने भएको छ। तर, पति वा पत्नीले स्वीकृति दिएमा भने त्यसलाई प्रकट गर्न वा प्रस्तुत गर्न मिल्नेछ। मूल ऐनको..
डिभीको रिजल्ट आयो, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
काठमाडौं । सन् २०२० को अमेरिकन डाइभर्सिटी भिसा (डीभी)को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सन् २०२० मा अमेरिका प्रवेशका लागि गत असोज १७ गतेदेखि कात्तिक २० गतेसम्म फारम खुलाइएको थियो..
आज अक्षय तृतीया, १० वर्षपछि अदभूत संयोग, के गर्ने ? के नगर्ने ?
काठमाडौं । वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन आज दान, होम, जप, तप गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदैछ । वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिन गरिने दान, होम, जप, तपको फल अक्षय अर्थात् कहिल्यै..
आज अमेरिकन डिभी चिठ्ठाको रिजल्ट हुने, यसरी हेर्नुस् नतिजा
काठमाडौं । सन् २०२० को अमेरिकन डाइभर्सिटी भिसा (डीभी)को नतिजा आज अर्थात् बैशाख २४ गते मंगलबार सार्वजनिक हुने भएको छ । सन् २०२० मा अमेरिका प्रवेशका लागि गत असोज १७..
लेखापालविरुद्ध ५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, ४ जना श्रीमती पनि तानिए
काठमाडौं । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको एउटा कर्मचारीले १५ वर्षमा कति कमाउँला रु करोड त पक्का नकट्ला किनभने लेखापाल भएको त १० वर्ष मात्र भएको छ । तर, झण्डै ६ करोड..
अमेरिकन डिभी चिठ्ठाको रिजल्ट मंगलबार हुने, यसरी हेर्नुस् नतिजा
काठमाडौं । सन् २०२० को अमेरिकन डाइभर्सिटी भिसा (डीभी)को नतिजा पर्सी अर्थात् बैशाख २४ गते मंगलबार सार्वजनिक हुने भएको छ । सन् २०२० मा अमेरिका प्रवेशका लागि गत असोज १७..
मानिस भन्दा जग्गाको संख्या धेरै, नेपालको भूमि तीन करोड ६३ लाख टुक्रामा कित्ताकाट
काठमाडौं । देशको जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा पारिएका छन् । एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको जमिन गत वर्षसम्ममा तीन करोड ६३ लाख २१ हजार..
आज मातातीर्थ औँसी, आमा संसारकै सबभन्दा महान्
काठमाडौँ ।वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज जन्म दिने आमालाई मीठा मीठा परिकार खान तथा राम्रा कपडा लगाउन दिएर खुशी पारी मनाइँदैछ । शास्त्रमा उपाध्याय (पण्डित,..
आइसीसी टी २० क्रिकेटको र्‍याङ्किङमा नेपाल तीन स्थानमाथि पुग्यो १४ औं स्थानमा
काठमाडौं । आइसीसी टी २० क्रिकेटमा नेपाल तीन स्थानमा माथि उक्लिएको छ। यसअघि १४ औं स्थानमा रहेको नेपालले दुई देशलाई पछि पार्दै ११ स्थानमा उक्लेको हो। आइरल्यान्ड र जिम्बाबेलाई पछि पार्दै..
नेपालमा ‘फानी’ आउँदैन, हावाहुरी र वर्षा मात्रै
काठमाडौं । समुद्री आँधी ‘फानी’ को असर नेपालसम्म पर्ने प्रक्षेपण जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ । तर, फानी नै नेपालमा आउने सम्भावना भने छैन । बंगालको खाडीको ओडिसा तटीय..
जापानमा नरुहितो बने राजा, ‘नयाँ युग’ सुरु
काठमाडौं । जापानमा नरुहितोले राजगद्दी सम्हालेका छन् । उनले गएराति औपचारिक रुपमा सिंहासन सम्हालेका हुन् । सन् १९८९ मा गद्दी आरोहण गरेका अकिहितोले ३० वर्षपछि मंगलबार पद त्यागेका थिए । आफू..
भोली बुधबार देशभर सार्बजनिक विदा
काठमाडौं । सरकारले बुधबार देशभर सार्बजनिक विदा दिएको छ । हरेक बर्ष मे महिनाको १ तारिखको दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मजुदर दिवसको लागि सरकार विदा दिएको हो । आठ घण्टा काम, आठ..
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई वर्षमै बोले १० हजार झूट
न्युयोर्क । सन् २०१७ जनवरीमा राष्ट्रपति पदभार सम्हालेदेखि डोनाल्ड ट्रम्पले १० हजारभन्दा धेरै झूटो दावी गरिसकेका छन् । वासिन्टन पोष्टका तथ्य–नगरानीकर्ताले गन्ती मापन गरेका थिए । सोमबार पत्रिकाले ट्रम्पको झूटो दावी..
जापानमा १० दिन छुट्टी दिइएपछि रिसाए जनता
एजेन्सी । जापानमा ३० वर्षपछि नयाँ राजा देखिने भएका छन् । बुधवार जापानी सम्राट् अकिहितोले तरवार दिएर राजगद्दी आफ्ना छोरा नारुहितोलाई सुम्पिन लागेका छन् । यस विशेष अवसरलाई उत्सवका रूपमा मनाउन..
जापानी राजाले आज गद्दि त्याग्दै
एजेन्सी । जापानका राजा अकिहितोले आज आफ्नो गद्दी त्याग्दै छन्। २ सय वर्षको इतिहासमा उनी पहिलो राजा हुन् जस्ले जिउँदै आफ्नो गद्दी छोडेका छन्। ८५ वर्षीय अकिहितो पछि उनका छोरा नरूहितोले..
आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सका पाइलट विजय लामा निलम्बित
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सका पाइलट तथा प्रवक्ता विजय लामाको लाइसेन्स सस्पेन्ड गरिदिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको दुबई उडान क्यान्सिल भएपछि लामाले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै प्राधिकरणले लामालाई..
विश्वकै ‘अति कम सकारात्मक देश नेपाल’
नेपाल विश्वका ‘अति कम सकारात्मक अनुभूति भएका’ १० देशहरुको सूचीमा परेको छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको यो सूचीमा नेपाल ५३ अंकका साथ पाँचौं स्थानमा रहेको छ । गालुप ग्लोबल..
८३ लाखको फूल बगैंचामा गोलभेडा फल्यो !
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले ८३ लाख खर्च गरेर निर्माण गरेको फूल बगैचामा गोलभेडा फल्न थालेको छ। उपमहानगरले वर्ष दिनअघि धरान बजारलाई सुन्दर बनाउन भानुचोकदेखि छाता चोकसम्म रेलिङ बनाएर फूल रोपेको थियो। लाखौं रुपैयाँका..
Results 289: You are at page5of 10